နိမိတ်တွေ အရင်လာပြီ - 7DAY THADIN
April 12, 2021 April 12, 2021 - by admin
ခုနောကျပိုငျး ဗုဒ်ဓဘာသာကို ထောကျခံလာတဲ့ ကမ်ဘာကြျောတှေ အမြားကွီးတှလေ့ာရတယျ….ဟိုးယခငျကတညျးက သိနကွေပမေဲ့ စီးပှားရေး လူမူ့ရေး စတဲ့ မလှနျ ဆနျနိုငျတဲ့ အကွောငျးတရားတှရှေိလို့အားလုံးထုတျဖျေါဖို့ဝနျလေးနကွေပုံရတယျ…
အခု ကပျလညျး ဆိုကျရော ဘယျသူမှ အားမ နာတော့ဘူး တကယျ တမျးကငျြ့သုံးသငျ့တဲ့ ဘာသာကိုတညီတညှတျတညျး ထုတျဖျေါနကွေပွီ….ကဆုနျလ ပွညျ့ နကေ့ လညျး ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမူးခြုပျနဲ့အိန်ဒိယဝနျကွီးခြုပျ မိုဒီတို့ ကနဒေါဝနျကွီးခြူပျတို့က ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကို ကူစားဖို့ ဗုဒ်ဓတရား တျောတှေ ကိုလိုကျနာကငျြ့သုံး ဖို့အထူးလိုအပျပါတယျဆိုပွီး မိနျ့ခှနျးထဲမှာ ထညျ့ပွောသှားတဲ့….
အခု အင်ျဂလနျ ဒိနျးမတျ နျောဝေ စတဲ့ နိုငျငံတှမှော ဗုဒ်ဓတရားတျောတှကေို ကြောငျးစာအုပျတှရေဲ့ သငျရိုးညှနျးတနျးတှမှော ထညျ့ပွီးသငျ နကွေပွီဆို တော့ သိပျမကွာ လောကျတော့ပါဘူး….အဲဒီကလေးတှကေ ဗုဒ်ဓတရားတျောတျောတှဟော ဘယျလိုကောငျးကွောငျး ဘယျလိုငွိမျးအေးကွောငျး တနကြေ့ ကွငွောပေးပါလိမျ့မယျ….
ကြှနျတျောခဏခဏ ပွောခဲ့ဘူး ရေးခဲ့ဘူးပါတယျ….ဗုဒ်ဓတရားတျောတှေ တကွော့ပွနျထှနျးကားဖို့အကွောငျးအရာတှေ အမြားကွီးထှကျပျေါ လာလိမျ့ မယျ …..နောငျ တခြိနျကရြငျ ဗုဒ်ဓဘာသာတခုပဲ တကမ်ဘာလုံး အာရုံစိုကျကွလိမျ့မယျဆိုတာ အခုတော့ စနပွေီလေ….သိပျမကွာခငျမှာပဲတခွားသော ကမ်ဘာ့ခေါငျး ဆောငျကွီး တှေ လညျး ဗုဒ်ဓဘာသာကိုကငျြ့သုံးကွဖို့တိုကျတှနျးကွလိမျ့ဦးမယျ….
ပတ်တမွား မှနျရငျ နှံမနဈပါဘူးလေ….ကြှနျတော့ပွောခဲ့ ရေးခဲ့တာတှေ မှနျကနျကွောငျး သကျသပွေဖို့ အခုကမ်ဘာကွီးပျေါမှာ ပွောငျးလဲ မူ့တှေ စတငျ နပေါ ပွီ…. ဗုဒ်ဓ ဘာ သာ ကို စိတျဝငျစားပွီး ပွောငျးလဲလာမဲ့ သူတှရေဲ့ သတငျးတှကွေားရဖို့ အခု ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျတှေ သတ်တိရှိရှိဖျေါထုတျနကွေပါပွီ….
သိပျမကွာခငျမှာ ထူးခွားသတငျးတှေ ဆကျတိုကျလာပါလိမျ့မယျ….ဝမျးပမျးတသာ စောငျ့မြှျော ကွပါ လို့ သတငျး ကောငျး ပါးပါ ရစေ….အခုက တော့ တောငျ့ထား ကွပါဦး သိပျမကွာတော့တဲ့အခြိနျမှာ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ နိမိတျကောငျးတှေ ပျေါလာတော့မှာပါ….။
ဦးမွငျ့ခိုငျ / Share ခွငျးဖွငျ့သာသနွာ့ပုနိုငျကွပါစေ
ခုနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထောက်ခံလာတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တွေ အများကြီးတွေ့လာရတယ်….ဟိုးယခင်ကတည်းက သိနေကြပေမဲ့ စီးပွားရေး လူမူ့ရေး စတဲ့ မလွန် ဆန်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေရှိလို့အားလုံးထုတ်ဖေါ်ဖို့ဝန်လေးနေကြပုံရတယ်…
အခု ကပ်လည်း ဆိုက်ရော ဘယ်သူမှ အားမ နာတော့ဘူး တကယ် တမ်းကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ဘာသာကိုတညီတညွတ်တည်း ထုတ်ဖေါ်နေကြပြီ….ကဆုန်လ ပြည့် နေ့က လည်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမူးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီတို့ ကနေဒါဝန်ကြီးချူပ်တို့က ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကို ကူစားဖို့ ဗုဒ္ဓတရား တော်တွေ ကိုလိုက်နာကျင့်သုံး ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီး မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်ပြောသွားတဲ့….
အခု အင်္ဂလန် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို ကျောင်းစာအုပ်တွေရဲ့ သင်ရိုးညွန်းတန်းတွေမှာ ထည့်ပြီးသင် နေကြပြီဆို တော့ သိပ်မကြာ လောက်တော့ပါဘူး….အဲဒီကလေးတွေက ဗုဒ္ဓတရားတော်တော်တွေဟာ ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း ဘယ်လိုငြိမ်းအေးကြောင်း တနေ့ကျ ကြေငြာပေးပါလိမ့်မယ်….
ကျွန်တော်ခဏခဏ ပြောခဲ့ဘူး ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်….ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ တကြော့ပြန်ထွန်းကားဖို့အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးထွက်ပေါ် လာလိမ့် မယ် …..နောင် တချိန်ကျရင် ဗုဒ္ဓဘာသာတခုပဲ တကမ္ဘာလုံး အာရုံစိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ အခုတော့ စနေပြီလေ….သိပ်မကြာခင်မှာပဲတခြားသော ကမ္ဘာ့ခေါင်း ဆောင်ကြီး တွေ လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်သုံးကြဖို့တိုက်တွန်းကြလိမ့်ဦးမယ်….
ပတ္တမြား မှန်ရင် နွံမနစ်ပါဘူးလေ….ကျွန်တော့ပြောခဲ့ ရေးခဲ့တာတွေ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ အခုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ပြောင်းလဲ မူ့တွေ စတင် နေပါ ပြီ…. ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ပြောင်းလဲလာမဲ့ သူတွေရဲ့ သတင်းတွေကြားရဖို့ အခု ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ သတ္တိရှိရှိဖေါ်ထုတ်နေကြပါပြီ….
သိပ်မကြာခင်မှာ ထူးခြားသတင်းတွေ ဆက်တိုက်လာပါလိမ့်မယ်….ဝမ်းပမ်းတသာ စောင့်မျှော် ကြပါ လို့ သတင်း ကောင်း ပါးပါ ရစေ….အခုက တော့ တောင့်ထား ကြပါဦး သိပ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် နိမိတ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတော့မှာပါ….။
ဦးမြင့်ခိုင် / Share ခြင်းဖြင့်သာသနြာ့ပုနိုင်ကြပါစေ
Previous Article ရှင်မထီးတန်ဆောင်းမှဟောကိန်းများ အတော်ထူးဆန်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်
Next Article ဟေတုပစ္စယော တစ်လုံးတည်းဖြင့် ဘဝကူးကောင်းခဲ့သူ